Akụkọ - Okwu mmalite nke uru na ọghọm dị na ngwa ngwa ntụ ntụ akọrọ na mmiri agwakọta mmiri
Okwu Mmalite nke uru na ọghọm nke akọrọ ntụ ntụ ngwa agha na mmiri gwakọtara ngwa agha
1. Uru na ọghọm nke ngwa agha agwakọta mmiri
Ngwa ngwa agwakọta mmiri mmiri bụ ngwa ngwa agwakọta dị njikere nke na-atụ ma na-agwakọta akụrụngwa dị ka ciment, nchịkọta dị mma, ihe mgbakwunye ịnweta, ihe mgbakwunye, ihe mgbakwunye, pigmenti na mmiri n'otu akụkụ nke ihe ọkụkụ a na-agwakọta, wee buru ya gaa ebe a na-ewu ihe site na a. mbugharị ụgbọ ala nwere ngwaọrụ agwakọta maka ojiji, nke achọrọ ka ejiri ya rụọ ọrụ n'ime oge akọwapụtara. Àgwà ahụ kwụsiri ike na ọnụ ọgụgụ ọkọnọ dị ukwuu n'otu oge. Mgbe ha rutere na saịtị ahụ, a na-ebu ụzọ echekwa ngwa agha ahụ, mgbe ahụ, ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eji aka ha tinye ngwa agha ahụ n'elu ihe mgbakwasị ụkwụ. A na-emepụta ngwa agha agwakọta mmiri na kọnkịtị, nke nwere njirimara nke nha ziri ezi yana ọsọ mmepụta ngwa ngwa. Ngwakọta mmiri agwakọta mmiri bụ ụdị ngwakọta ngwa ngwa, yana oge ojiji ya nwere oke, yabụ a ga-eji ya mee ihe n'ime oge ụfọdụ ka emechara ya.
Ihe ndị a nke ngwa agha agwakọta mmiri na-egosikwa uru na ọghọm ya na mmepe. Uru ya bụ ndị a:
(1) Mmepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-enyere aka ịchịkwa na mmesi obi ike;
(2) Nnukwu ọkọnọ otu oge, nke dabara adaba maka owuwu akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa akwa mmiri na-egbochi mmiri na ọrụ ndị ọzọ;
(3) Ọ dịghị mkpa maka ịgwakọta na saịtị, nke na-echekwa mmefu nke ihicha akụrụngwa na nkwakọ ngwaahịa;
(4) Ebe a na-ewu ihe owuwu nwere ebe dị mma na obere mmetọ;
(5) Enwere nnukwu nhọrọ nke akụrụngwa. Mkpokọta nwere ike akọrọ ma ọ bụ mmiri na-enweghị ihicha, nke na-ebelata ọnụ ahịa;
(6) Enwere ike ịgwakọta ya na nnukwu ihe mkpofu ụlọ ọrụ dị ka uyi ofufe, nke nwere ike ọ bụghị naanị ịchekwa ihe onwunwe, kamakwa belata ọnụ ahịa ngwa agha.
N'ezie, ọ nwekwara ọtụtụ adịghị ike na mmepụta na ojiji:
(1) Ebe ọ bụ na ndị na-emepụta ọkachamara na-agwakọta ya nke ọma, ọ dị mkpa ka ịchekwa ya na arịa ndị mechiri emechi na saịtị, na ibu njem otu oge buru ibu, nke a ghaghị iji ya mee ihe na obere oge, n'ihi ya, ọ gaghị ekwe omume ịchịkwa mgbanwe mgbanwe. oriri dị ka ọganihu ihe owuwu si dị;
(2) Enwere nnukwu ụgbọ njem nke otu oge, yabụ na ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere idobe ya na arịa mechiri emechi na saịtị. Ka oge na-aga, ọ ga-enwe nnukwu ihe achọrọ na arụ ọrụ, ịtọ oge na nkwụsi ike nke ịrụ ọrụ nke ngwa agha;
(3) Oge njem na-amachibidoro ọnọdụ okporo ụzọ.
2. Uru na adịghị ike nke akọrọ agwakọta ngwa agha
Ngwakọta agwakọta akọrọ bụ ụdị ngwa ngwa agwakọta dị njikere, nke a na-eji akụrụngwa akọrọ dị iche iche n'otu akụkụ, nke ụlọ ọrụ ahụ na-ahazi nke ọma ma gwakọta ya, na-ebuga ya na ebe a na-ewu ihe na akpa ma ọ bụ nnukwu, ma gwakọta ya na mmiri ma ọ bụ ihe na-akwado ya. oke a kapịrị ọnụ na ebe eji. Ya mere, e jiri ya tụnyere mmiri gwakọtara ngwa agha, ọ na-ejedebeghị site na iji oge na nke ukwuu, n'ihi ya, ọ bụ na-eduga ntụziaka nke mmepe nke njikere mbuaha ngwa agha.
Ngwakọta agwakọta akọrọ nwere ọtụtụ uru:
(1) Nrụpụta mmepụta dị elu. N'ihi na a na-ebufe ya na silo, na-akpali ya na-akpaghị aka, na-agbapụta ya na ngwa ngwa eji arụ ọrụ, mmepụta ya ruru 500% - 600% nke mmepụta mmepụta omenala;
(2) Ngwakọta mechanized nke ịrụ ọrụ nke ọma nwere ike hụ na ọgwụgwọ na ịrụ ngwa agha dị mma, ka ịzenarị ọnọdụ nke oke ma ọ bụ ntakịrị ịgwakọta mmiri na usoro na-ezighi ezi;
(3) Mortar nwere ọtụtụ ụdị, ọmarịcha mma, arụmọrụ kwụsiri ike na ngwa dabara adaba;
(4) Uru akụ na ụba kpọrọ nkụ ngwakọ agwakọta nwere ezigbo aja grading na obere urughuru nha. N'ihe gbasara ijide n'aka na ịdị mma dị mma, enwere ike ibelata ọkpụrụkpụ nke ngwa agha ma belata usoro ihe owuwu;
(5) Social uru akọrọ ihe ngwa agha ghọtara na management usoro nke mwekota nke mmepụta, mgbasa na ọkọnọ, nke na-anọchi anya ulo oru mmepụta direction ọhụrụ ụlọ cimentity ihe. Tụkwasị na nke a, enwere ike iji mmiri mee ya ozugbo, a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, a na-eme ka ọnọdụ ọrụ ndị a ma ama, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Agbanyeghị, ngwa ngwa agwakọta akpọnwụ ka nwere ọghọm ndị a:
(1) Ntinye ego nke ahịrị a na-emepụta ntụ ntụ ntụ dịtụ nnukwu, na itinye ego nke nnukwu tankị na ụgbọ ala na-ebu ibu dịkwa ukwuu;
(2) N'ihi na a na-ejikọta ihe ndị na-emepụta ihe site na ihe ọkụkụ akọrọ, enwere ihe dị elu chọrọ maka mmiri ọdịnaya nke ihe, n'ihi ya, e nwere ụfọdụ ihe mgbochi na nhọrọ nke akụrụngwa;
(3) A na-achọ ịgwakọta mmiri mmiri n'oge a na-ewu ụlọ, n'ihi ya, e nwere ihe dị elu chọrọ maka nkà na ụzụ ọkachamara nke ndị ọrụ na-agwakọta ihe;
(4) N'ime usoro nchekwa na nnyefe pneumatic, ọ dị mfe imepụta nkewa ihe, na-ebute ngwa agha na-enweghị isi.